के भन्छिन् त ? रुपन्देहीमा निधन भएका बाबुराम थापाकी भतिजी | My News Nepal
के भन्छिन् त ? रुपन्देहीमा निधन भएका बाबुराम थापाकी भतिजी
२०७६ चैत्र १६ गते
बुटवल । रुपन्देहीको बुटवल धागो कारखानामा सञ्चालित कोरोना भाइरस उपचार विशेष अस्पतालमा आइतबार बिहान भर्ना गरिएका रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका वडा नं. ४ मुर्गियाका बाबुराम थापाको मृत्यु भएको जनाइएको छ ।
मृतक थापा युएइबाट नेपाल फर्किएर उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएको जनाइएको छ । नमुना परीक्षणका लागि काठमाडौं पठाए पनि रिपोर्ट आइ नसकेको जनाइएको छ ।
उनको मृत्युका बारेमा उनकै पारिवारिक सदस्य सविता क्षेत्री थापाले लेखेकी छिन्, निशब्द छु।अन्कल हजुर को स्वर्गमा वास होस्।
बुटवल कोरोना विशेष (अस्थायी) अस्पतालमा क्यारेन्टाइनमा राखिएका सैनामैना नगरपालिका ४, मुर्गियाका ३४ वर्षिया (बाबुराम)थापाको मृत्यु भएको छ । उहा १३ गते कोरोना अस्पताल बुटवल धागो कारखानामा भर्ना हुनु भएको थियो।
उहाको स्वाब परीक्षणका लागि टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाइएको थियो तर रिपोर्ट आए छैन । उहा चैत ८ गते वैदेशिक रोजगारी दुबईबाट नेपाल आउनु भएको थियो । उहालाई आज बिहान बाट जोरोले अत्याधिक च्यापेको र काठमाडौं लैजाने तयारी थियो ।
नवलपुरमा थप ३ मा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै जम्मा संक्रमित १३ पुगे